素樱樱 (@MeeHsu_85)'s conversations - Wattpad
Feb 21, 2021 04:01PM
မီးရဲ့ Readerတွေ အားလုံး သာဓုခေါ်လို့ရအောင်ပါ ဒီနေ့ မန္တလေးကမ်းနားလမ်းက မိသားစုတွေအတွက် ဆန်အိတ်၊ဆီနဲ့ တခြား မုန့်အခြောက်အခြမ်းတွေ ဝယ်လှူဖို့အတွက် မီး ရဲ့ Fb Msgrက ခင်တဲ့သူတွေဆီမှာ အလှူခံခဲ့ပါတယ် Kpayမှာ မီးရဲ့၁သောင်းအပါအဝင် ၅၇၀၀၀တိတိ ရတာကို မီးက ကွက်တိဖြစ်အောင် မီးပိုက်ဆံထဲကနေ ၃၀၀၀ ထပ်ပြီး စိုက်လိုက်တာမို့ မီးက ၁၃၀၀၀ လှူဖြစ်သွားတယ် xD ပြီးတော့ waveကနေ ၁၃၁၃၀၀ တိတိ ရခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့် Kpayနဲ့ Wave စုစုပေါင်း ၁၉၁၃၀၀ တိတိပါ ရထားသမျှ အကုန်လုံးကို လူငယ်များ စုပေါင်းအလှူ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ မန္တ​လေးက မီးအသိကျဲကျဲဆီ လွှဲလိုက်ပါတယ်ရှင့် မီးနဲ့ Fbမှာ Friဖြစ်တဲ့သူတွေက Accထဲမှာ Postတင်ထားတာမို့ မြင်ကြမှာပါ ခုလို ၁ရက်တည်းနဲ့ ဒီလောက် အလှူငွေတွေ အများကြီး ရလိမ့်မယ်လို့ လုံးဝ မထင်ခဲ့မိတာပါ မီးကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လှူပေးကြတဲ့ ကျဲကျဲတွေ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညီမလေးတွေအကုန်လုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့် ♥
မီးရဲ့ Readerေတြ အားလုံး သာဓုေခၚလို႔ရေအာင္ပါ ဒီေန႔ မႏၲေလးကမ္းနားလမ္းက မိသားစုေတြအတြက္ ဆန္အိတ္၊ဆီနဲ႔ တျခား မုန့္အေျခာက္အျခမ္းေတြ ဝယ္လွူဖို႔အတြက္ မီး ရဲ့ Fb Msgrက ခင္တဲ့သူေတြဆီမွာ အလွူခံခဲ့ပါတယ္ Kpayမွာ မီးရဲ့၁ေသာင္းအပါအဝင္ ၅၇၀၀၀တိတိ ရတာကို မီးက ကြက္တိျဖစ္ေအာင္ မီးပိုက္ဆံထဲကေန ၃၀၀၀ ထပ္ၿပီး စိုက္လိုက္တာမို႔ မီးက ၁၃၀၀၀ လွူျဖစ္သြားတယ္ xD ၿပီးေတာ့ waveကေန ၁၃၁၃၀၀ တိတိ ရခဲ့ပါတယ္ အဲ့ဒါေၾကာင့္ Kpayနဲ႔ Wave စုစုေပါင္း ၁၉၁၃၀၀ တိတိပါ ရထားသမၽွ အကုန္လုံးကို လူငယ္မ်ား စုေပါင္းအလွူ ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ မႏၲ​ေလးက မီးအသိက်ဲက်ဲဆီ လႊဲလိုက္ပါတယ္ရွင့္ မီးနဲ႔ Fbမွာ Friျဖစ္တဲ့သူေတြက Accထဲမွာ Postတင္ထားတာမို႔ ျမင္ၾကမွာပါ ခုလို ၁ရက္တည္းနဲ႔ ဒီေလာက္ အလွူေငြေတြ အမ်ားႀကီး ရလိမ့္မယ္လို႔ လုံးဝ မထင္ခဲ့မိတာပါ မီးကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ လွူေပးၾကတဲ့ က်ဲက်ဲေတြ၊သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ညီမေလးေတြအကုန္လုံးကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ရွင့္ ♥
Arthurဗျ ဟိုဆစ်လေးရြဲ ချစ်ပုံပြင်က မြန်မာဘာသာပြန် novelမရှိဘူးလားဗျ
@Thorhan မရှိဘူးရှင့် သူက Original ကိုကManhwa version ပဲထွက်ထားတာပါ Replyနောက်ကျသွားတာ Sryပါနော် မီး ခုမှWpထဲဝင်ဖြစ်လို့ပါ
လိုင်းကောင်းတဲ့Keyboard Fighterလေးတို့ရေ Twitter မှာ သွားTwtကြပါဦး မီးတို့ဘက်မှာ Telenor က လိုင်းလုံးဝ မကောင်းလို့ VPN ကျော်ထားတာတောင် ခုထိ ဝင်မရလို့ပါ FB မှာတောင်Post 1ခု တင်ဖို့ အကြာကြီးစောင့်နေရတာ အဲ့ဒါကြောင့် Twitter မှ #လေးတွေနဲ့အတူ သွားကူညီပေးကြပါဦးဗျို့
လိုင္းေကာင္းတဲ့Keyboard Fighterေလးတို႔ေရ Twitter မွာ သြားTwtၾကပါဦး မီးတို႔ဘက္မွာ Telenor က လိုင္းလုံးဝ မေကာင္းလို႔ VPN ေက်ာ္ထားတာေတာင္ ခုထိ ဝင္မရလို႔ပါ FB မွာေတာင္Post 1ခု တင္ဖို႔ အၾကာႀကီးေစာင့္ေနရတာ အဲ့ဒါေၾကာင့္ Twitter မွ #ေလးေတြနဲ႔အတူ သြားကူညီေပးၾကပါဦးဗ်ိဳ႕
@MeeHsu_85 tweet ေနတယ္ခ❤️
fb က အဆင္မေျပလို႔ tweetပဲ Tweet ေနရတယ္
@MeeHsu_85 ကျဲတော့ တစ်နေကုန် ဆက်တိုက်ကို tweetနေတာ
Hello, Everyone! အပြင်ထွက်တဲ့အခါကျ ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ယောက်တည်း မထွက်ကြပါနဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိထားကြပါ ကိုယ့်မိသားစုမဟုတ်တဲ့ အပြင်က ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံကြပါနဲ့ ကိုယ့်အိမ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြောက်အခြမ်းတွေလည်း ဝယ်ထားကြပါ ဒီနေ့မနက်လိုမျိုး Internet လိုင်း ထပ်ပြီး ဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမျိုး ဖြစ်လာခဲ့ရင် အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်ထဲမှာပဲ ဘေးကင်းအောင် နေကြပါ ကိုယ့်ကိုယ့်ကို အထူးဂရုစိုက်ပါနော် ♥
Hello, Everyone! အျပင္ထြက္တဲ့အခါက် ျဖစ္နိုင္ရင္ တစ္ေယာက္တည္း မထြက္ၾကပါနဲ႔ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိထားၾကပါ ကိုယ့္မိသားစုမဟုတ္တဲ့ အျပင္က ဘယ္သူ႔ကိုမွ မယုံၾကပါနဲ႔ ကိုယ့္အိမ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခာက္အျခမ္းေတြလည္း ဝယ္ထားၾကပါ ဒီေန႔မနက္လိုမ်ိဳး Internet လိုင္း ထပ္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္ခံလိုက္ရတဲ့အခါမ်ိဳး ျဖစ္လာခဲ့ရင္ အတတ္နိုင္ဆုံး အိမ္ထဲမွာပဲ ေဘးကင္းေအာင္ ေနၾကပါ ကိုယ့္ကိုယ့္ကို အထူးဂ႐ုစိုက္ပါေနာ္ ♥
သူလည္း ဂ႐ုစိုက္ပါ​ေနာ္ အဆငိ​ေျပပါ​ေစ
Chasing you ေလးup ေပးပါအံုးမင္မင္
ဒီနေ့မှာ wattpad ထဲဝင်ဖြစ်လို့
Happy Birthday sis yay....
@ThunderTun5 Kyay zuu pr shint❤️
Happy birthday ပါ သာသာ
May be healthy and happy.
မီးရေ ကျန်းကျန်းမာမာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့
@HninPhwePhweLatt ကျေးဇူးပါနော် ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါရစေရှင့်♥